Njengoba ukudoba imfundamakhwela. Ezinye izisekelo ze lokudoba.
Kwabaningi abadobi-Wabasaqalayo kuyinto imfihlakalo ukudoba lesifanele. Akukhona ikhono eliphezulu ukudoba, ngoba ukuze baqonde indlela ukudoba, akudingeki ulwazi olukhethekile eqolo. Abaningi, mhlawumbe lazy kakhulu ukuba zifunde izincwadi professional, okuyinto izikhathi ngempela isidina enhlanganweni ezivamile lokudoba. Labo abafuna baqonde izisekelo yokudoba Imibandela, ngaphandle noma nini-ukudliwa, kubalulekile ukufunda lesi sihloko.
izindlela Ukudoba zinezikhathi, ngaphezu kwakho konke, kuye ngokuthi yisiphi isikhathi sonyaka. Ulwazi nemikhuba izinhlanzi kanye nendlela ukubamba izinhlanzi zinhlobo ezahlukene, kuyofika isikhathi, kuba izithelo yokuzizwela mathupha. ukulungiselela nje ngoba uhambo ukudoba iqala nge Ukukhetha gear, lolo, izicupho, lolo. Tackle elula (isib akhethiwe ezigabeni kokuqala ngokudoba iflothi induku). Iphutha main emabangeni yokuqala ukuthuthukiswa ukudoba simiswe ngalendlela lelandzelako: aba maningi igiya, elikhulu izinhlanzi ungakwazi ukubamba. Zonke nje okuphambene: inhlanzi enkulu uyesaba ngenela emangelengele obukhulu kakhulu line ukudoba nehhuku likhulu kakhulu. Kuyefana nasendleleni le yamabhola antantayo ezinkulu.
Ukuze uthole usizo ezimweni ezithile, ungavula konke ukuze izincwadi ukudoba efanayo noma abawongoti abayobe bafundiswe indlela ukudoba kahle. Kepha lolo, kungcono ukuqala izibungu abavamile, ekubambeni ku induku iflothi. Khona ungazama ukupheka inhlama ukudoba noma nje iresiphi ekhethekile ukupheka semolina.
Futhi, akukuhle ukuba izame livela Stinger hook ukufihla ngokuphelele kuyo lolo encane. Ngokungadingekile ucezu enkulu test efanayo bayobe bengekho izinhlanzi ezincane, futhi ungavumeli senhlanzi enkulu, okuyinto vele ungakwazi ukunuka iqhinga. Kanjani ukudoba ngaphandle ukulahlekelwa okungadingekile, izincwadi ukufundisa Ingxenye enesihloko esithi "Izinsiza kusebenza Ukudoba", echaza ukuthi indlela ethile yokudoba kanye netintfo ekubambeni. Kodwa uthisha main - umkhuba. Poklovki isikhashana, liyehlisa, nenhlanzi ikakhulukazi edonsa zichazwe ngokuningiliziwe ezincwadini ngokudoba. Ukuba nala makhono okukhulunywa esisebenzayo sendlela ukubamba inhlanzi, ukuthengwa ngokwabo ngokuhamba lokudoba.
Okulandelayo, udinga ukubalula isici uzokhetha zokudoba izinhlanzi. Kuleli kuncike impumelelo ukudoba ngokuya catch, kanye nayo ekulondolozweni breakages igiya. Njengoba sazi ukuthi inhlanzi kakhulu kugcina amanzi emaphethelweni esinindolweni, lezi zifiki ozama ukubamba wakhe khona cishe ku sasemhlangeni. Kodwa kubalulekile ukwazi ukuthi baphonse, ukudonsa gear, okungcono nge catch, futhi akusho ukuwuchitha on amagatsha, izimila zasolwandle noma yini enye. Experience uphonsa izinto lapha, ngakho kudingeka aqeqeshwe baphonse ngenela ukubamba izinhlanzi ngaphandle umgomo endaweni ethile endaweni evulekile endaweni amanzi, ngaphandle kokucwasana ezingadingekile ogwini noma phezu kwamanzi. Ukudoba ngaphandle kokuyekethisa impilo, imvelo, izinsika - kungcono amakhono, babebaningi.
ukudoba Ukuziphatha - kubuye umniningwane obalulekile, eziklanyelwe ukuqinisekisa impumelelo yayo, ukudoba nenhlonipho kanye nokulondolozwa. It is hhayi Kunconywa ukuba ugxume run on uhambo ukudoba ukuthethisa kakhulu. Epholile ingxoxo angizange ngilimale ukudoba, ngaphezu kwalokho, ukwenza kube mnandi ngokwengeziwe. Ukudoba udoti, uphonsa izinto esengeziwe emanzini futhi eshisa konke uwela ngaphansi ingalo - yiso kakhulu.
Agglomeration Modern - kuyinto ...